ချစ်သူလေးစွမ်ဇာနည်း ရဲ့ မွေးနေ့ကို သူများနဲ့မတူအောင် ထူးထူးခြားခြားလေး ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ စွမ်း ရဲ့ ကောင်မလေး – Let Pan Daily
Let Pan | August 3, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် စွမ်းဇာနည် ကတော့ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ အချစ်ရေးအဆင်ပြေနေပါတယ်နော်။ ကောင်မလေးကို ဆေးကြောင်ပြီး ပါးရိုက်ခဲ့တာကြောင့် ပြသနာအကြီး အကျယ်တက်သွားသော်လည်း လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အဆင်ပြေနေဆဲပါပဲနော်။
ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ စွမ်းဇာနည်ရဲ့ မွေးနေ့ကိုလည်း သူ့ကောင်မလေးက ဆုတောင်းပေးထား တာလည်း အရမ်းကိုကြည်နူးစရာပါပဲနော်။ ” Happy birthday par❤️ကျန်းမာပါစေ အသက်ရှည်ပါစေ လိုတရဘဝမျိုးထာဝရ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ 😘” လို့ ဆုတောင်း ပေးထားပါတယ်နော်။
လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက် ကလည်း သူ့ကောင်မလေး သီလရှင်ဝတ်တဲ့အတွက် စွမ်းဇာနည်ကိုယ်တိုင်လည်းရဟန်းဝတ်ခဲ့ပါသေးတယ်နော်။ ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ စွမ်းဇာနည်ရဲ့မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးသွားကြပါဦးနော် ပရိသတ်ကြီးရေ….
ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ စြမ္းဇာနည္ ကေတာ့ သူ႔ခ်စ္သူေကာင္မေလးနဲ႔ အခ်စ္ေရးအဆင္ေျပေနပါတယ္ေနာ္။ ေကာင္မေလးကို ေဆးေၾကာင္ၿပီး ပါး႐ိုက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျပသနာအႀကီး အက်ယ္တက္သြားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အဆင္ေျပေနဆဲပါပဲေနာ္။
ဒီေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ စြမ္းဇာနည္ရဲ႕ ေမြးေန႔ကိုလည္း သူ႔ေကာင္မေလးက ဆုေတာင္းေပးထား တာလည္း အရမ္းကိုၾကည္ႏူးစရာပါပဲေနာ္။ ” Happy birthday par❤️က်န္းမာပါေစ အသက္ရွည္ပါေစ လိုတရဘဝမ်ိဳးထာဝရ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ 😘” လို႔ ဆုေတာင္း ေပးထားပါတယ္ေနာ္။
လြန္ခဲ့တဲ့လပိုင္းေလာက္ ကလည္း သူ႔ေကာင္မေလး သီလရွင္ဝတ္တဲ့အတြက္ စြမ္းဇာနည္ကိုယ္တိုင္လည္းရဟန္းဝတ္ခဲ့ပါေသးတယ္ေနာ္။ ဒီေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ စြမ္းဇာနည္ရဲ႕ေမြးေန႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးသြားၾကပါဦးေနာ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ….
ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်အောင် LIVE လွင့်နေတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် ရဲ့ ဗီဒီယို
အကြည့်တွေ နဲ့ တင် ကြွေသွား စေလောက်တဲ့ နန်းသီရီမောင် ရဲ့ ဗီဒီယို
ပန်းပွင့်လေးတွေကြားမှာ အသည်းယားစရာ ကောင်းနေပြီး အရုပ်မလေးလို ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ သွန်းဆက်
အတွင်းခံမဝတ် ပဲ ထိထိ မိမိဆက်ဆီ ကျလွန်းတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ မော်ဒယ် စတယ်လာ
ရေချိုးနေ တဲ့ ဗီဒိယို လေးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြ လိုက်တဲ့ “ချိုဇင်ဝင်းပြည့်”
ခပ်မိုက်မိုက် စတိုလ် လေး နဲ့ ပိုစ့် ပေးကာ ဓာတ်ဖမ်း နေတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေး လာတဲ့ ယ်နွယ်ထွွန်း
ရင်ဖိုချင်စရာ နောက်ကျော အလှတွေ ပေါ်လွင်နေပြီး အသားကပ်ဝတ်စုံလေး နဲ့ နှစ်ခါ ပြန်ငေးရ လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှု ပိုနေတဲ့ M ဆိုင်းလု
“အရာအားလုံးဟာ မောင့်အတွက် ကြီးဘဲ ဖြစ်စေရမယ် မလို့သာ ခေါ်ရင်” လို့ ဆိုလာတဲ့ “ဆောင်းယွန်းစံ”
နှင်းဆီပွင့်ဖက်ပေါ်မှာ နာမည် ရေးထိုးပြီး ချစ်သူ ရဲ့ နာမည်ကို အသိပေး ထုတ်ပြော လိုက်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်
ခါးအထိ ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဖက်ရှင်အဆန်းလေး နဲ့ မြင်သူတိုင်း ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ပွဲတက်လာတဲ့ အေးမြတ်သူ